Xajmiga Waraaqaha: A, B, C iyo in ka badan | Abuurista khadka tooska ah
Jaangooyooyin xajmiga xajmiga ayaa leh siyaabo kala duwan u jiray waqtiyo kala duwan sida dalal kala duwan. Iyo inkasta oo maanta ay jirto halbeeg caalami ah, waxaan tagi karnaa dalal kala duwan oo meeraha ah si aan uga helno taxane kala duwan oo xajmiyada xaashida ah sida "warqad" maxay noqon laheyd dalal ku yaal Ameerika, maadaama aan dhihi karno kuwa kale sida Filibiin.
Maskaxda ku hay in xajmiga xaashidu uu saameynayo warqadda qorista, qalabka xafiisyada, kaararka iyo noocyada kale ee dukumiintiyada daabacan. Tirada waraaqahaas ka mid ah waa heerka caalamiga ah ee koobaya taxanaha C ee ISO 269. Sida ISO 269, ISO 216 waxay qeexaysaa heerka caalamiga ee cabbirka waraaqaha ee laga isticmaalo adduunka intiisa badan, in kasta oo aan dhigi karno waxyaabo ka reeban sida Kanada, Mareykanka , Mexico iyo Dominican Republic.
1 Cabirka taxanaha A
2 Warqadda B
3 Waraaqda C
3.1 Cabbirka xarafka DL
4 Tirada waraaqaha Mareykanka
5 Tirada wargeysyada
Cabirka taxanaha A
Cabirka taxanaha taxanaha taxanaha ah, oo lagu qeexay heerka ISO 216, waa lagu siiyay jadwalka hoose shaxanka labadaba millimitir iyo inji. Haddii aan rabno cabirada santimitir, waxaa lagu heli karaa iyadoo loo qeybiyo qiimaha milimitir 10.
Jaantuska taxanaha taxanaha taxanaha ah wuxuu bixiyaa a matalaad muuqaal ah sida cabirku isula xiriiro. Tusaalaha fudud waa A5 oo ah kala badh xajmiga xaashida A4, halka A2 noqon doono badh A1. Marka waxaan sifiican u fahmi karnaa cabirka oo aan ka dhignaa inaan ka warqabno iyaga si aan ugu isticmaalno midka aan u baahanahay ujeedooyinka oo dhan.
Kuwani waa cabir kasta tirada:
4A0 cabbirka: 1682 x 2378 mm.
Cabirka ka weyn A0, 4A0 iyo 2A0 laguma qeexaayo ISO 216, in kastoo haa waxaa loo isticmaalaa waraaqaha weyn. Qaababkani waxay ku saleysan yihiin heerka Jarmalka DIN 476, kaas oo aasaas u ahaa waxa loo yaqaan 'ISO 216'.
Cabbirradani waxaa laga isticmaalaa dhammaan qaybaha adduunka kuwaas oo ay ku jiri lahaayeen Mareykanka, Kanada iyo qaybo ka mid ah Mexico. Cabbirka A4 wuxuu noqday halbeegga loogu talagalay xarfaha waddammada Ingiriiska ku badan. Yurub gudaheeda sidoo kale waxaa laga isticmaali jiray tan iyo bartamihii qarnigii XNUMXaad.
Tirada taxanaha warqadda B sidoo kale waxaa lagu qeexay ISO 216 oo waxaad si fiican u arki kartaa sida loo qeexay, labadaba sentimitir iyo inji sawirka hoose:
Tirada waa kuwan:
B0 cabbirka: 1000 x 1414 mm.
Noocani taxanaha B ahaa loo abuuray iyada oo ujeedadu tahay bixinta cabbir waraaqo ah kuwaas oo aan daboolin taxanaha A, laakiin sidoo kale adeegsada tusmada 1: roo2. Qiyaasaha B waxaa lagu qeexaa cabirka B (nambarka), oo ah micnaha joomatari ee A (lambar) iyo cabirka A (lambar-1).
Nidaamkani wuxuu ujeedku yahay caawinta kordhinta iyo yaraynta dukumiintiyada halka balaadhinta A ilaa B ay lamid tahay B ilaa A.
Waxaa jira dhowr waxyaalood oo reeban oo ah tirada aan la jarin B iyo B2 + iyo B1XL. Iyaga laguma qeexin ISO waxayna u jiraan baahi warshadeed oo gaar ah. Cabirradeedu waa kuwan:
Sida labada taxane kale, waxaan tusnaas cabbirada sintimitir iyo inji ee cabbirka ee taxanaha C ee baqshadaha. Jaantusku wuxuu muujinayaa cabbirka mid kasta marka la barbar dhigo xaashida warqadda A4. Qiyaasta baqshadda Mareykanka iyo Waqooyiga Ameerika ma daboosho ISO 2016.
Tirada baqshadda C waa lagu qeexay macnaha joomatari ee cabirka A iyo B oo leh tirooyin isku mid ah. Qiyaasaha C4 waa celceliska joomatari ee A4 iyo B4. Si loo caddeeyo, celceliska joomatari ee tiro aad u wanaagsan oo togan waa xididka Nth ee wax soo saarka astaamaha N. Xisaab yar waligaa wax ma yeeleyso.
Waxa ay soo saarto waa cabir u dhexeeya labada hela xaraf xajisto taxanaha Waraaq xajmigeeda ah, sidaas darteed xarafka C4 wuxuu ku habboon yahay xaashida A4 ee waraaqda aan la shaacin.
Sawirada hoose waxaad ka heli kartaa kala duwanaanshaha xarfaha C4, C5 iyo C6 marka loo eego cabirka A4. Sawirka ugu horeeya waxaan haynaa xarafka C4 oo ka koobnaan kara xaashida A4, warqada C5 ee ku jiri kara A4 kalabar laban laab ah iyo warqada C6 oo ay ku jiri karto A4 isku laab laab labo jeer, taas oo noqon laheyd warqada A6.
Hadda si fiican ayaan u fahmi karnaa maxaa yeelay cabirka kaararka waxaa loola jeedaa cabirka isku mid ah A4, A5 iyo A6.
Cabbirka xarafka DL
Mid ka mid ah waxyaabaha ugu waaweyn ee loo isticmaalo waraaqaha ganacsiga waa qaab DL kaas oo aan ku hoos dhicin cabbirka taxanaha C maadaama ay leeyihiin dhinac saamiga ka duwan. Qaabkani wuxuu asal ahaan ka soo jeeday Jarmalka 20s waxaana loo yaqaanay 'DIN lang'. Cabbirkan waxaa lagu qeexay heerarka ISO ee cabbirka xarfaha.
Cabirka Xarafka DL waa 110 x 220 mm oo waxay awoodi doontaa inay hayso xaashi A4 ah oo loo laabay saddex qaybood oo isle'eg oo barbar socda dhinacyada gaagaaban.
Tirada waraaqaha Mareykanka
Waqooyiga Ameerika, oo ay ku jiraan Mareykanka, Kanada, iyo qaybo ka mid ah Mexico, waa aagga kaliya ee adduunka koowaad ee aan isticmaalin heerka ISO 216. Waxay isticmaalaan cabirrada noocan ah:
Xarafka badhka: 140 x 216 mm.
Waraaq: 216 x 279 mm.
Sharci: 216 x 356 mm.
Sharciga yar: 127 x 203 mm.
Waa in la sheegaa taas Cabirka A4 wuxuu u dhigmaa Xarafka Mareykanka, si aan u sameysano xiriir fudud. Waxay ahayd ANSI (Machadka Heerarka Qaranka ee Mareykanka) oo qeexayay taxane taxane ah oo xajmiga xaashida ah oo ku saleysan qaabka Waraaqda, oo leh dhowr qeexitaanno u dhexeeya cabbirka A, B, C, D iyo E.
Kuwaani waa cabirradooda:
J: 216 x 279 mm.
D: 559 x 864 mm.
Sidoo kale cabirka B + lagu daray kaas oo cabirkiisu yahay 329 x 483 mm. Qiyaasaha kale waa waraaqo qaabdhismeed oo leh saamiyada 4: 3 ama 3: 2. Kuwani waa saamiga la midka ah kuwa loo isticmaalo shaashadaha kombiyuutarka.
Wargeysyada ayaa ahaa lagu daabacay cabbirro kala duwan oo leh istaandarka 'Broadsheet' kaas oo ku saleysan 600 x 750 mm. Ereygan wuxuu ka yimid waraaqaha keliga ah ee majaajillada siyaasadeed iyo ballaadhyada lagu iibiyo waddooyinka, kuwaas oo aad caan u ahaa ka dib markii England ay canshuur ku soo rogtay wargeysyadii dib u soo noqday 1712. Waxaan wajaheynaa cabbir sii kordheysa oo ka sii yaraaneysa.
Berliner waa cabbir kale oo joornaal ah waana 315 x 470mm. Qaab ay adeegsadaan wargeysyada ka soo baxa Yurub. Waxaan sidoo kale leenahay cabirka tabloid-ka oo ah 280 x 430mm oo tilmaamaya bartamaha Broadsheet. Sheekadiisa wuxuu ku yimaadaa ereyga tabloid Journalism kaas oo sheekooyinka ku soo koobay cabbir yar, oo si fudud loo akhriyi karo.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Khayraadka » Tirada waraaqaha